Madaxda sare ee dawladda Puntland oo kulan la yeeshay waxgaradka gobolka Mudug, kalana tashaday dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka. [Akhris …] – Radio Daljir
Agoosto 13, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 13 – Waxaa maanta kulan aad u ballaaran ku yeeshay Hotel Taar ee magaalada Galkacyo, madaxda ugu sar sarraysa dawladda Puntland iyo waxgaradka kala duwan ee gobolka Mudug.
Kulankaan oo ahaa mid xasaasi ah isla markaana ka duwan kulamadii hore ee madaxda dawladdu ay la yeelan jireen bulashada gobolka Mudug muddadii ay ku sugnaayeen magaalada Galkacyo, ayaa la iskula soo qaaday qodobo aad u muhiim ah oo dhammaantood ku aaddan xaaladda gobolka Mudug gaar ahaana magaalada Galkacyo oo wakhtiyo is xig-xigay ay ka dhaceen shaqaaqooyin amni xumo.
Mas?uuliyiin dawladda oo hadalo qiimo badan halkaasi ka yiri ayaa si wadajir ah ugu dheeraaday ka hadalka xaaladda gobolka iyo sida ay u arkaan in lagu heli karo xal-buuxa oo laga gaaro maashilka gobolka.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawladda Puntland, Gen. C/laahi Jaamac Ilko-jiir, oo shirkaasi ka soo jeediyey hadal dheer oo dhinacyo badan taabanayey ayaa sheegay waxgaradka iyo odayaasha in looga fadhiyo wax ka qabashada dhibaatada amni xumo ee gobolka ka jirta, wuxuuna wasiirku sheegay taas in looga gudbi karo oo kaliya bulashada oo hal dhinac uga soo jeedsata cidkasta oo hagar-daamo ku haysa hannaan socodka howlaha nabad-galyo gobolka.
Wasiirku wuxuu shirkaasi ka sheegay dawladdu in ay ku mashquulsan tahay xaaladda gobolka, isla markaana ay ka go?an tahay in ay dhidibada u taagto maamul adag oo awood iyo kartiba u yeelan kara maaraynta mashaakilaadka gobolka.
Md. Ilko-jeer, wuxuu intaasi sii raaciyey hadda in ay gacanta ku hayaan qorshe lagu yagleelayo golayaashii deegaanka ee dhammaanba gobollada Puntland , taas oo gobolka Mudug uu noqon doono gobolka ugu horreeyey ee dawladda cusub ee M/weyne Faroole ka unugto golaha shacabka ee degmooyinka gobollada Puntland.
Wasiirku, waxaa uu ka codsaday ka qayb galayaashii shirka ee matalayey bulashada gobolka Mudug muddo ku siman 10 cisho gudahood in ay ku soo xulaan xubnihii ka mid noqon laha golaha deegaanka ee degmada Galkacyo, si kadibna loogu sii gudbo degmooyinka kale ee isla gobolka.
Waxaana golahaasi ay noqon doonaan sida uu tilmaamay wasiirku, kuwo shuruudo badan hor yaalliin oo ku taxaluqa xagga aqoontooda, waayo aragnimada, xilkasnimada qofka, hantida uu haysto, la dhaqankiisa bulsho iyo waliba sumcadda uu gobolka ku dhaxleeyahay iyo guud ahaanba Puntland.
M/weynaha Puntland Dr. C/rixmaan Maxamed Maxamuud ?Faroole? oo isna kulul uga hadlay arrinta dhismaha golayaasha deegaanka gaar ahaanna midka magaalada Galkacyo, ayaa ka codsaday odayaasha dhaqanka ee gobolka Mudug in ay soo xulaan dad buuxin kara shuruudaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ay soo gudbisay, si loo helo gole deegaan oo aqoon iyo waayo aragnimo u leh shaqada loo dhiibayo isla maraana hagi kara bulashada gobolka iyo kuwa kala ee Puntlandba.
M/weynuhu waxaa si gaar ah carabka ugu adkeeyey in dib loo soo celin doono qofkii buuxin waaya shuruudaha ka mid noqoshada golayaasha deegaanka, sidaasi darteedna odayaashu aysan golaha keenin cid aan munaasib ku ahayn booska ama jagada loo dhiibayo.
Dhanka kale Nabadoon Maxamed Maxamuud Indho-yare, oo isna halkaasi ka hadlay mas?uuliyiinta dawladda kadib ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan-yiin tallaabada dawladda ee ku aaddan dhisidda golayaasha deegaanka ayna gacan buuxda ku siinayaan sidii loo heli lahaa gole shacab oo aqoon iyo kartiba u leh howsha loo xil saaray ee masiirka umadda.
Shirka maanta oo xiiso gaar ah lahaa, ayaa waxaa ka qayb galayey M/weynaha Puntland Dr. C/rixmaan Maxamed Maxamuud ?Faroole? kuxigeenkiisa C/samad Cali Shire, afhayeenka golaha wakiillada C/rashiid Maxamed Xirsi, wasiirrada arrimaha gudaha, amniga, maaliyadda, cadaaladda, caafimaad, maamul wanaagga, dimuqraadiyeynta, wasiirro ku xigeeno, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland, mas?uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada, dhanka bulashada gobolkana waxaa ku sugnaa goobtaasi, nabad-doonno, ganacsato, culimo-awdiin, aqoon-yahano, iyo waxgarad kaleeto oo aad u tiro badan.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa madaxda dawladda in si rasmi ah beeluhu u horgeeyaan ciddii uga mid noqon lahayd golaha shacabka, taas oo xilligaan la dareemayo hadal haynteeda.
M/weyne Faroole oo uga tacsiyeeyey Pakistan dilka 5 wadaad oo mutadawiciin ah oo lagu dilay Galkacyo. [Dhegaysi …]